Rhyme, mutambi akapusa ane chinongedzo chinoyeuchidza chaizvo Apple | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vashandisi vatove neanofarira mimhanzi inoridza. Mune yangu nyaya, ndinoda Elisa, Lollypop uye ndichafarira VLC kana v4.0 yasvika yakagadzikana vhezheni, asi ivo vese vakasiyana uye pane zvinhu zvakawanda zvekufunga nezvazvo zvinoita kuti isu tisati tawana izvo isu tiri kutsvaga. Dai pasina zvido, pangadai pasina vanogadzira vanogadzira zvakasiyana zvinhu, sezvazviri Rwiyo. Kunyangwe, kutaura chokwadi, zvinoyeuchidza chimwe chinhu.
Mavara uye iyo yese yeiyo Rhyme interface inoyeuchidza yakawanda yeiyo iOS Music app, iPadOS kana macOS, asi zviri nyore. Iri mumatanho ayo ekutanga, saka maficha senge ezvinyorwa zvekutamba zvisati zvawedzerwa. Panguva yekunyora uku, chikamu che "Playlists" chiripo, asi zvinoratidza chinyorwa chinotaura kuti vachakurumidza kuuya ("Kuuya munguva pfupi"). Kana ndikaiisa muChirungu imhaka yekuti haisati iri muchiSpanish parizvino.
Rhyme inoshandisa iyo pendi yemavara iyo Apple inoshandisa mune yayo Music app
Kana tangotanga kuridza mimhanzi, pazasi panoonekwa sarudzo dzeKutamba / Kumbomira, kumberi / kumashure, isina kujairika modhi, dzokorora maitiro, yekufambira mberi bhaa uye mubato yehuwandu. Kuruboshwe tinoona rwiyo rwuri kuridza, muimbi uye kavharo yeakaunzi, uye Rhyme iri zvishoma. Zvakanaka, zvaisazove zvakanaka kana ndikataura izvozvo, sezvo iine chikamu ("Kumba") matinoona zvatakatamba munguva pfupi yadarika uye nealbum tab kusarudza izvo zvatinoda kuisa. Izwi rekutsanangura iri nyore kana minimalist. Chii chimwe, ine yakajeka uye yakasviba madingindira uye yakawanda yenharaunda inogona kuiswa mune ramangwana.
Sekutaurwa kwatinoitwa neruzivo rwepamutemo, ku isai pane linux tinogona kusarudza iyo flatpak kurongedza, Snapkana AppImage, asi inowanikwawo muAPB mapakeji, RPM, yepacman kana kodhi kodhi kubva Iyi link.
Rwiyo ichine chimwe chinhu chekuvandudza, kana zvakadaro ndinozviona. Kune iro kuruboshwe divi vanofanirwa kuwedzera zvinhu sevanyori pamwe nezvinyorwa, izvo zvirinani kana padiki. Izvo hazvingavhiringidze kuve nyore uye zvaizoita kuti zvinhu zvive nyore. Iyo ine dhizaini yakanaka, asi ndinenge ndichinyepa kana ndikati yakagadzirirwa ini; ikozvino ndiri kufara naElisa uye mune ramangwana ini ndichave ndina VLC 4, asi isu hatina kukwanisa kumira kutaura nezve imwezve sarudzo iyo, mukuwedzera, iri multiplatform.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Rhyme, minimalist mutambi ane interface inoyeuchidza chaizvo Apple
Zvinetso zvinogadzirwa nekupedzwa kweiyo DST Root CA X3 chitupa zvakatotanga